Kameleoon ipuratifomu imwechete yekushandurwa kwemahara optimization (CRO) kubva kuA / B kuyedza uye kugadzirisa kune chaiyo-nguva yekuita munhu uchishandisa hungwaru hwekunyepedzera. Kameleoon's muchina-kudzidza algorithms inoverenga mukana wekushandurwa kwemushanyi wega wega (anozivikanwa kana kusazivikanwa, mutengi kana tarisiro) mune chaiyo-nguva, kufanofungidzira kwavo kwekutenga kana chinangwa chekuita. Kameleoon Kuedza uye Yemunhu Platform Kameleoon ndeye simba webhu uye izere stack yekuyedza uye yekugadzirisa chikuva chevaridzi vezvigadzirwa zvemadhijitari uye vashambadzi vanoda kuwedzera shanduko uye kutyaira exponential online mari kukura. Iine maficha anosanganisira A / B
Chii chinonzi Zviratidzo? Zviratidzo ndiyo huwandu hweanogona kuitika emaziso pane yako nyaya kana pasocial media positi zvichibva paanofungidzirwa vaverengi / vanoona yeiyo nzira / sosi. Muna 2019, zvimiro zvinoseka kunze kwemba. Hazvisi zvakajairika kuona zvinoonekwa mumabhirioni. Kune vanhu vanosvika mabhiriyoni manomwe pasi pano: vanenge bhiriyoni imwe yavo havana magetsi, uye vazhinji vacho havana basa nechinyorwa chako. Kana uine 7 bhiriyoni maonero asi iwe wobuda kunze